आज चर्चिच अभिनेत्री झरना थापाको जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् झरना ? – News543Online
March 26, 2021 adminLeaveaComment on आज चर्चिच अभिनेत्री झरना थापाको जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् झरना ?
आज चर्चित अभिनेत्री झरना थापाको जन्मदिन परेको छ । चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ का हिट सिरिजहरु दिएर लोकप्रियता कमाएकी सुन्दरी नायिका झरना आजबाट ४१ वर्षमा लागेकी छिन् ।
सर्पले प्रकृतिमा भएको विषाक्त तत्वहरुलाई आफूमा ग्रहण गरेर प्राकृतिक सन्तुलनलाई कायम राख्दछ । हिन्दूहरुले अमृत समान दुध दिने गाईलाई जसरी आमा समान मानेर पूजा गर्छन, त्यसरी नै विष ओकल्ने सर्पको पूज गर्ने जाती त हिन्दूधर्मी आर्यहरु नै हुन् ।
बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर … गीतका गायकको निधन
कालोपत्रे माग गर्दै धनगढीमा स्थानीयले गरे सडकमै रोपाईं समाचार